Odayaasha Buhoodle oo Camey ku wareejiyaay Ciidan iyo Hub (dhegayso) – Radio Daljir
Odayaasha Buhoodle oo Camey ku wareejiyaay Ciidan iyo Hub (dhegayso)
Juunyo 1, 2018 1:47 g 2
Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey Madaxweyne ku xigenka Dowladda Puntland oo booqasho kujooga magaaladda Buhoodle ee Xarunta gobalka Cayn ayaa maanta odayaasha iyo waxgaradka Magaaladdas kala wareegay Ciidamo gaaraya 135 Askari oo kamid ahaa Ciidamo ku sugnaa Buhoodle.
Munaasabad kadhacday Gudaha Buhoodle waxaa ku sugnaa Cuqaasha iyo waxgaradka Gobalka Cayn ,kuwaas oo kajawabay durba hadalki Camey ee ahaa in laga doonayo reer Buhoodle inay ka qayb qaatan xoreynta gobalka Sool .
Camey ayaa odayaasha Buhoodle uga mahadceliyaay sida ay u soo abaabuleen ciidankan iyo gaadiidka dagaalka ay wataan oo ka qaybqaata difaaca Puntland iyo dagaalka lagula jiro maamulka Somaliland.
Madaxweyne Camey: “Maanta waxaan u nimid calaf iyo ciidan”
mustafe c/dulqadir 2 years ago
waloo bahan yahy inay utashadan dantoda
DAGAALKAS KII KU DHINTA WA EHLU NAAR.
KII TAAGEERADA WAA DAMBIILE.